[Ukara] Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac): Mac iPhone Data Recovery
The World si 1st iPhone na iPad Data Recovery for Mac
Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 9, iPhone 6s na iPhone 6s Plus
Mac iPhone DAAT Iweghachite: ihe ọ na-eme Naghachi Lost Data na gị iOS Ngwaọrụ
Mmadụ na mberede ehichapụ ihe dị mkpa na gị na iPhone? Furu efu ma ọ mebiri gị iOS ngwaọrụ? Ọ dịghị mkpa ka egwu! Dr.Fone (Ofụri Esịt dakọtara na iOS 8), gị Mac iPhone data mgbake ọkachamara, bụ ebe a na-enyere gị agbake bara uru data na i chere e ruo mgbe ebighị ebi na-efu.
Ọ bụ dị mfe dị ka 1-2-3
Dr.Fone Bụ ihe kasị keukwu data mgbake ngwọta na ahịa. Ị nwere ike naghachi furu efu data kpọmkwem site iOS ngwaọrụ ma ọ bụ weghachite backups si iTunes na iCloud. Ole na ole clicks, ihe furu efu na-na mberede hụrụ.
Naghachi niile ụdị data si ọhụrụ iOS ngwaọrụ, gụnyere:
iPhone 6/6 Plus / 5S / 5C / 5 / 4S iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2 iPod aka 5
Site na ngwaọrụ
* Grey Parts Iweghachite na-abịa n'oge na-adịghị.
* N'akụkụ nile nwere ike natara site iTunes / iCloud ndabere, ma e wezụga Facebook ozi. Ugbu a na-ehichapụ ọ bụ furu efu ozi site na Facebook ozi naanị ike natara kpọmkwem site iOS ngwaọrụ.
Weghachite iTunes na iCloud backups naghachi data maka ihe niile iOS ngwaọrụ
Na nke a iPhone data mgbake maka Mac, ị nwere ike mfe naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ photos, ederede, ngwa data na ruo 17 dị iche iche nke faịlụ site na gị iTunes ndabere, ma ọ bụ site gị online iCloud akaụntụ.
Factory Isetịpụ Weghachi
* Site iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere, Nke a Mac iPhone data mgbake software na-ahapụ gị naghachi kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, kalenda, na ndetu, ncheta, Safari na ibe edokọbara, igwefoto mpịakọta, foto iyi, olu memos, ozi olu ozi olu, na App data si WhatsApp, Flirc , iPhoto, iMovie, Kindle, keynote, na ndị ọzọ ebe a >>.
Preview ma họrọ tupu agbake
Dr.Fone Si keukwu Doppler nwere ike ịhụ a otutu recoverable data. Ịnwere ike ịchọgharị na họrọ data gị mkpa n'ihu na ịpị naghachi bọtịnụ.
View oku History
Idozi sistemụ arụmọrụ iOS Devices
Mgbe gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka araparawo Iweghachite ọnọdụ, rapaara na Apple logo, ma ọ bụ igosi abnormally, ị pụrụ iji Dr.Fone bụ pụtara ìhè rụkwaa Sistem mma ka nwere ya ofu ihe na-erughị 10 nkeji.
Naghachi Files kpọmkwem site iOS Ddevices: Jikọọ gị iOS ngwaọrụ na-amalite ike iṅomi ya.
Naghachi Data si iTunes ndabere faịlụ: Ike ịhụ data kpọmkwem site ngwaọrụ? Sapeta iṅomi gị iTunes ndabere faịlụ na a Mac iPhone data mgbake software.
Naghachi Data si iCloud ndabere: Na nke a Mac iPhone data mgbake omume, ị nwere ike ịnweta ma preview data gị iCloud ndabere iji nweta ha selectively.
Preview na-agbake Data tupu Iweghachite: Ịnwere ike ihuchalu niile data gị iOS ngwaọrụ, iTunes na iCloud ndabere, na mgbe ahụ chekwaa ha na Mac.
Nyocha ahịa anyị Na Dr.Fone maka iOS (Mac) - na ị ga-, Oke
Nov 22,2015 5:41 am
ABOSLUTE Thunder nlaghachie SOFTWARE n'oge a!
Ya mere, m mgbe kemgbe otu dee a nyochaa, dị ka mgbe, ọbụna na ọtụtụ puku ihe na m na zụtara on amazon na m na hụrụ n'anya, m bụ nnọọ mgbe onye dee a nyochaa. Ee, ụfọdụ n'ime unu pụrụ ...
A nnukwu ekele gị na creators nke a ngwa, ọ ofu nsogbu m na 10 nkeji!
Ga-software-enwe ike naghachi ọ bụla data ma ọ bụrụ na m na-amaghị na passcode?
Gịnị mere na kọmputa m agaghị enwe ike ịchọpụta m ngwaọrụ?
Nbudata na Iweghachi si iCloud ndabere na-emezughị.
Nke iOS ngwaọrụ na faịlụ ka software support?
Ikpokọta Dr. Fone na TunesGo nyefee gị data azụ gị ngwaọrụ kasị mma enyi
TunesGo: Re-mmekọrịta na gị na New iOS Ngwaọrụ
Wee ọhụrụ iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod aka? Ọ dịghị mkpa ka na-aga site hassle nke mwube ihe niile ọzọ. Na ole na ole clicks, i nwere ike ịbụ na-agba ọsọ ọzọ maka a enweghị nkebi mgbanwe. Mụta ihe banyere TunesGo (Mac) >>
Ukwu Nye: (15% Gbanyụọ)
Dr.Fone maka iOS + TunesGo
Zụta ugbu a $139.9 $119.9